शाहरुख खानले धूम ४ मा भिलेनको भूमिका निभाउलान् ? | Makalukhabar.com
शाहरुख खानले धूम ४ मा भिलेनको भूमिका निभाउलान् ?
एजेन्सी । बलिउडका सुपरस्टार शाहरुख खान आदित्य चोपडाको ब्लकबास्टर सिरिज धूमको चौथो भागमा ‘भिलेन’ को रुपमा आउन सक्ने देखिएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार शाहरुख धूम –४ मा आउने कुरा छ । यो भन्दा आगाडि पनि धूमको पछिल्लो सिरिजमा उनी काम गर्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा यही विषयको चर्चा भईरहेको छ । पछिल्लो वर्ष शाहरुख खान अभिनित चलचित्र जिरो प्रदर्शन भयो । दर्शकमाझ राम्रो छाप छोड्न यो चलचित्र असफल भयो । बक्स अफिसमा फ्लप भएको चलचित्र पछि शाहरुखसँग अरु काम अहिले छैनन् ।
राकेश शर्माको जीवनिमा आधारित ‘सारे जहाँ से अच्छा’ को लागि पनि शाहरुखले नाई भनिसकेका छन् । उनीसँग समयको कमी छैन, के अब शाहरुख खान कुनै नयाँ चलचित्रमा भिलेन बन्ने सोच्दैछन् ? यशराज फिल्मको धूम सिरिजमा अहिलेसम्म दिग्गज कलाकारले खतरनाक भिलेनको भूमिका गर्दै आएका छन् ।
शाहरुख पछिल्लो केही समयदेखि राम्रो हिरो बनेर सफल हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा के उनले यो विकल्प रोज्लान ? यो भन्दा अगाडिको धूम सिरिजमा जोन अब्राहम, ऋतिक रोशन र आमिर खानले भिलेनको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सबैको चासोको विषय यो छ की नयाँ चलचित्रमा को भिलेन भएर आउँछ ?
समाजवादी पार्टीभित्र दुई धार, कोरिया जान ९५ अर्ब खर्च, भित्रियो २६ अर्ब मात्र